शेयर बजारमा-आईटी र युवा ! - सुनाखरी न्युज
शेयर बजारमा-आईटी र युवा !
Posted on: December 14, 2021 - 7:39 am
पंकज अधिकारी – पूँजी बजार भनेको यस्तो बजार हो जहाँ खरिदकर्ता र बिक्रेताहरू बन्ड, स्टक, आदि जस्ता वित्तीय धितोपत्रहरूको व्यापारमा संलग्न हुन्छन् । खरिद÷बिक्री गर्न व्यक्ति र संस्थाहरू सहभागी हुन्छन् ।
पूँजी बजारले बचतकर्ताहरूबाट संस्थामा बचत रकम च्यानलाइज गर्न मद्दत गर्दछ जसले तिनीहरूलाई उत्पादनशील प्रयोगमा लगानी गर्दछ । सामान्यतया, यो बजार अधिकतर दीर्घकालीन सोचमा व्यापार गर्छ । पूँजी बजारमा प्राथमिक बजार र दोस्रो बजार हुन्छन् । प्राथमिक बजारले स्टक र अन्य धितोपत्रहरूको नयाँ मुद्दाहरूको व्यापार गर्छ, जबकि दोस्रो बजारले पहिले जारी गरिएका धितोहरूको किनबेच गर्छ । राम्रोसँग काम गर्ने स्टक बजार आर्थिक विकासको लागि महत्तवपूर्ण छ किनभने यसले व्यवसायहरूलाई सामान्य जनताबाट द्रुत रूपमा पूँजी प्राप्त गर्न अनुमति दिन्छ ।
स्टकहरूलाई तरल सम्पत्ति मानिन्छ किनभने तिनीहरू सजिलैसँग नगदमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ र कुनै पनि समयमा खरिदकर्ताहरूको ठूलो संख्या हुन्छ । यसले जीडीपी, कर्पोरेट नाफा, र आर्थिक वृद्धि सूचकांकहरूको प्रतिक्रिया दिन्छ तसर्थ स्टक बजार सधैं समृद्ध अर्थतन्त्रको एक कारक हो । हरेक देशको शेयर बजारलाई नियामक निकायद्वारा नियमन गरिन्छ, यसका दिशानिर्देशहरूले स्टक एक्सचेन्जलाई नियमन गर्दछ, बजारमा पारदर्शिता र लगानीकर्ताहरूको अधिकारको रक्षा गर्दछ । यसको मतलब कुनै लगानीकर्ताले सेयर बजारमा लगानी गर्दा उसको पैसा मात्र होइन, उसको अधिकार पनि यी नियामक निकायबाट सुरक्षित हुन्छ ।
यसले उनीहरूलाई आफूले लगानी गरेको कम्पनीले गरेको कुनै पनि प्रकारको जालसाजी गतिविधिबाट बचाउँछ । यसले लगानीलाई अझ सुरक्षित बनाउँछ र लगानीकर्ताहरूलाई कुनै दुर्घटना नहुने विश्वास दिन्छ । प्रविधिले लगभग सबै क्षेत्रहरूलाई मद्दत गरेको छ । सेयर बजार पनि यसबाट अछुतो छैन । प्रविधिको मद्दतले सजिलैसँग स्टकहरू खरिद, बिक्रि गर्न सकिन्छ । पहिले जब सबै काम कलम र कागजमा सीमित थियो, यो झन्झटको व्यापार धेरैको लागि सम्भव थिएन । आजकल यस उद्देश्यका लागि विभिन्न सफ्ट्वेर, एपहरु सन्चालनमा आएका छ्न । एक निश्चित कम्पनीमा आफ्नो स्टक सजिलै किन्न वा बेच्न सकिन्छ । विभिन्न प्लेटफर्महरू त्यहाँ छन् जसले लगानीकर्ताहरूलाई कुनै विशेष स्टकको नाफा र नोक्सानको बारेमा बताउँछ ताकि उनीहरूले कुन स्टकमा लगानी गर्ने भनेर सजिलैसँग थाहा पाउन सकून ।
आईटी एक कारक हो यसले सेयर बजारको विकासमा बलियो प्रभाव पारेको छ । आईटीका तीन मुख्य तत्वहरू हार्डवेयर, सफ्टवेयर, थिंक वेयर (ज्ञान व्यवस्थापन) हुन । आज, राष्ट्रको आर्थिक स्वास्थ्य र सूचना प्रविधिको स्तरबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध छ त्यसैले पनि सूचना प्रविधि विकासको बौद्धिक खाका तयार गर्न आवश्यक छ । आईटी पूर्वाधार विकास एक बहु–चरण प्रक्रिया हो । “ज्ञानको रूपमा आईटी“ र “उद्योगको रूपमा आईटी“ मा उद्यमशीलताको उच्च आवश्यकता छ । आईटीको उचित उपयोग, व्यवस्थापन र विकासले अर्थशास्त्रको शरीरमा लाभकारी प्रभाव पार्न सक्छ । सेयरहोल्डरको समझदारीको क्षेत्रमा आधुनिक ट्रेडिङ विधिहरू (ई–ट्रेडिङ) देखि पूँजी बजारको विकासका लागि यी विधिहरूको प्रयोग अपरिहार्य छ ।
तसर्थ, विधिहरूमा परिवर्तन र नवीनता सिर्जना गर्न विशेषज्ञ रूपमा गरिएको विश्लेषण आवश्यक छ । तर यहाँ, नियामक निकायमै बसेर शेयर बजार प्रति धावा बोल्ने, लगानि कर्तालाई भयवित र त्रसित बनाउनेहरुको कमि छैन । ठुला र सम्पन्न लगानिकर्ताहरुको आडमा सानालाई हत्तोसाहित गर्ने, भ्रमपुण समाचारहरु सम्प्रेशण गर्ने ,अप्राकिृतिक रुपमा बजारलाई घटाउने, बडाउने । राज्यको सर्वोच निकायमा बसेर त्यहि क्षेत्रको ज्ञान आपÞmुमा नभ​एको कुरा खुलेआम भन्दै हिड्ने । लामो समय सम्म नियामक निकायलाई नेत्रित्व विहिन बनाउने । यि र यस्तै मान्छेहरुको हालिमुहालि गर्ने ठाँउ बन्न पुग्यो नेपालको शयेर बजार । लुटेर​, ठगेर​, चन्दा मागेर​, धम्क्याएर​, भ्रष्टाचार गरेर आएका नेताहरुले नै पुँजिबजारलाई अनुत्पादकको संज्ञा दिनु नेपाल जस्तो विकास्नोमुख राष्ट्रका लागि बिडम्बना हो ।
तसर्थ येस्तै बेतिथिहरुको निराकरण गर्न​, शेयर बजारमा युवाको भुमिका अत्यन्तै अपरिहार्य छ । आम लगानिकर्ताको आवज बुलन्द बनाउदै, सुचना–प्रबिधिलाई अङ्गाल्दै युवा जोश र जाँगर अघि बड्नै पर्छ । युवाहरूले लगानी गर्नुका अन्तरसम्बन्धित कारणहरू — बालबालिका र युवाको वर्तमान अवस्था सुधार गर्न, जनसांख्यिकीय प्रवृत्ति र अन्तरपुस्ताको असंतुलनको सामना गर्न, र भविष्यको लागि हाम्रो जिम्मेवारीको भावना प्रमाणित गर्न ।